Humni qabsoo Oromoo golgoleessitoota ykn garboomsaa nii luuccesse malee hinbarbadeessine – Kichuu
HomeAfaan OromooTVHumni qabsoo Oromoo golgoleessitoota ykn garboomsaa nii luuccesse malee hinbarbadeessine
Humni qabsoo Oromoo golgoleessitoota ykn garboomsaa nii luuccesse malee hinbarbadeessine
Qabsoon keenyaan ykn qabsoo Oromoon Wayyaanee barbadeessine utuu hintaane nii luuccessine jennee ilaalla. Sababaan caasaan Wayyaanee har’as achuma jiruka! Caasaan Wayyaanee aanaa irraa hanga godinaatti uummata luuganii lafee qorqaa dhiiga nu dhugaa turan bakkuma jiru.
Sadarkaa ilaalcha siyyaasaan yoo ilaalle nii riphan jenna malee, badaniiru jechuu hindandeenyu. Humni riphe tokko waa lamaafi
1. Hojii isaa saffisiisuuf dhoksaan waa xaxuuf riphee hojii diigumsa Oromoo, hojii naaffisa qabsoo ABO irratti bobba’ee jira ta’a. Qabsoon Adda Bilisummaa Oromoo tikfamuu baannaan humni riphee jiru kun dhoksaatii wal sooree irreesaa jabeeffachuu mala. Gaafa irreesaa jabeeffatee nutti bahe nu dhabamsiisuuf aanja’uufii mala. Kanaaf humna riphee jiru kanaan yoo ati duuteetta jennee tuffanne hojii keenya hojii qabsoo laaffisuutti nu geessa. Kun ammoo akeekaaf kaayyoo ABO nurkatti akka dhabamu taasisuu mala.
Falli kanaa yeroo kamuu diina ofii tuffachuurraa fagaachuu. Diina ofii guddaas sodaachuu miti, gadi buufnees xiqqeessinee ilaalurra jala buunee shira isaanii caqasaa qabsoo keenya kunuunfachuutu akka Oromootti nu kabachiisa.
2. Diinni keenya riphe kun tarii humni laafeera ta’a. Humni laafe kun ammoo yeroof akka boquu gadi cabsatu haalli siyyaasaa nii taasisa. Qaamni humni isaa laafe humnikoo laafeera jedhee abdii muraa? Lakki. Sirriitti Cumboo siyyaasaa wal sooree jabaachuu isaaf tattaafata. Mudhii walii hidhee lafa jala wal qabata. Qaama humnasaa laaffise sana fakkaatee qaama faallaasaa sana keessa seenee soorrata siyyaasaa qaama isa miidhe sanaa nyaatee qaamuma sana balleessuu irratti hojjeta. Qaama isa dhabamsiisuuf hojjetu sana ta’uurratti fuulleffata. Mirga qaama barbaade keessa seenee booreessuu lafa jalaan walii laata. Kanaaf Addi Bilisummaa Oromoo of haa tiksu! Qabsoo isaa ammoo Oromoon marti akka tiksuu qabun dhaama.
Elaa ammas nan jedha dubbiin Wayyaanee injifattan jedhu akka nama dhuunfaatti naa hinliqinfamu. Wayyaanee nii luuccessine, wayyaanee humna ishee laaffisne, Wayyaanee mudhiisheerraa sabbata humna ta’uuf sabbata siyyaasaa hiikne. Humni luucca’e gaafa irra fiignee dabarru goomboobee ka’uuf carraa bal’aa qaba. Humni diinaa Luucca’e jira yoo jenne hundeen akka ciccirru hojii manaa walii laanna. Kanaaf humna Wayyaanee balleessinee jirra utuu hintaane luuccessinee jirra. Humni kunis riphee jira. Ka’uuf baduu gidduutti argama. Yoo ka’e nu fixa, yoo bade ammoo garboomfataaf dhuma.
Haqa walitti himnuu? Elaa qaama tokko duubaaf keessa addaan baaftee ilaallaan ati gowwaadha. Saantima keessaaf duubaa garaagara baaftee ilaallaan wal’aalaa jedhamta. Maxinoo irraaf jala lamatti qooddee ilaallaan jargiiffa/gowwaa jedhamta. Wayyaaneef caasaa Wayyaanee kaleessaa addaan baafnee kan ilaallu taanan nutu gowwaadha. Caasaa Wayyaanee tima kana keessa teenyee, caasaa Wayyaanee ilkaansaa keessa foon Qeerroof qabsaa’otaa jiru kana Wayyaanee irraa addaan baafnee ilaallaan nuti gowwoota siyyaasaati. Wayyaaneen jirtii? Eeyyee Oromiyaa dhuunfatanii jiru ammayyuu. Garuu; riphaniiru of dhoksanii uummataaf qabsaa’ota keessa dhokatan. Kanaaf qabsoon keenya hanga dhumaatti sobaaf sossobbii irraa walaba ta’ee itti fufuu qaba.
Dhiimma hidhannoo WBO ilaalchise Marii Hoogganoota ABO Miseensota Shanee Gumii Gumii Sabaa J/ Toleera Adabaa, J/Ibsaa Nagawoo fi J/Atoomsaa Kumsaa Waliin goonee turre laalaa gaffillee gariif deebi’ii ni taha.
Tamsaasa kallatti ONN : jiila ABO Magaalaa Arjootti simannaa taasifame
♦ [African proverb] ♦
You can also send us a proverb you want to inspire others with. pic.twitter.com/z4GGQwM3Qd
— africanews (@africanews) October 10, 2018